Iphupha leNdlu enemibono yeentaba
Ukuba ufuna ukuhlala uphumle kwaye unoxolo ngeholide yakho, ukwindawo elungileyo! Indlu ikwilali encinci ePiedmont kumbindi wendalo yasendle. Ifulethi elizimeleyo langoku likumgangatho ophantsi wevilla ehlaziyiweyo. Iqula lethu lokuqubha livulwa ngoMeyi ukuya kuOkthobha kwaye iJacuzzi xa uyicela isoloko ifumaneka . Ungonwabela yonke imihla iSpectacular Mountain Views, kunye neendawo ezinoxolo. Ngesicelo kunokwenzeka ukongeza kunye nelinye igumbi lokulala le-2 Pax
Imisebenzi emininzi enokwenzeka kummandla: ulwandle, imisebenzi ye-nautical (ibhodi yePadel, i-pedal boat, i-canoe, i-Sailing boat), i-Mountain biking, i-natural reserve, i-zip line, inkundla yentenetya, i-squash, i-Padel tennis. Kule ndawo kukho iindawo zokutyela ezininzi ezilungileyo, ungaya kuthenga kwaye ufumane iimarike ezinkulu zivulwa kabini ngeveki wena nabantwana bakho. Ilali yimizuzu eli-10 ukusuka kwi-Intra, idolophu encinci enomtsalane kwichibi elincinci laseLago Maggiore.
ICaprezzo yilali encinci nenomtsalane kumantla eItali. Kukho abantu abaphakathi kwe-80 ne-100 kule lali ngokuxhomekeke kwixesha lonyaka. Kule lali kukho ivenkile encinci yokutya evulwa kusasa kunye nevenkile yokutyela.
UMarie ohlala kwindlu engasentla kweflethi uhlala ekhona ukuze akwamkele kwaye unokukucebisa ukuba ufumane ezona ndawo zibalaseleyo zokutyelela.